Thibaut Courtois oo fariin u diray ciyaartoyda Chelsea ka hor kulanka Everton – Gool FM
Thibaut Courtois oo fariin u diray ciyaartoyda Chelsea ka hor kulanka Everton
Liibaan Fantastic April 30, 2017
(London) 30 Abriil 2017 Goolhayaha kooxda Chelsea ee Thibaut Courtois ayaa fariin muhiim ah u diray ciyaartoyda kooxdiisa ka hor kulanka galabta ee Everton.
Blues ayaa horyaalka ku hogaaminaysa 4-dhibic, guul ay gaarto galabta waxay ka dhigantahay inay horyaalka u sii qaadeen tilaabadii ugu muhiimsanayd.
Courtois ayaa u sheegay asxaabtiisa kooxda inay ixtiraamaan Everton hadii ay doonayaan inay 3-dhibic kula soo laabtaan gurigooda.
“Everton si fiican ayeey u ciyaarayaan, barbaro ayeey galeen isbuucii hore laakiin dhabtii aad ayeey u adagyihiin marka ay joogaan Goodison Park, wayna guulaysteen 8-dii kulan ee ugu danbeeyay ee ay ku ciyaareen gurigooda” ayuu u sheegay Web-ka kooxdiisa.
“Waa rikoor cajiib ah, sidaas darteed waa inaan ixtiraamnaa taas, balse wali waxaan isku dayeeynaa inaan ciyaarno kubadeena, sifiican ayaan u ciyaarnay kulankii gurigeena ee aan ka hortagnay, waxaan rajaynayaa inaan soo muujino isla kii oo kale”.
“Waan ognahay in taasi ay adagtahay, Lukaku ayaa uga ciyaaraya afka hore, wuxuuna dhaliyay goolal badan, waxay haystaan ciyaartoy da’yar ah oo badan, balse waxaan doonaynaa inaan aadno halkaas oo aan ka imaano anaga oo kor joogna”.
Barcelona oo ka cabsi qabta in Lionel Messi uu dib ula midoobo Pep Guardiola
MAXAA HELAY BLUES?: Chelsea oo Petr Cech ku darsatay shaxda galabta ay kala hortagi doonto Everton xili uu u ciyaaro Arsenal